🥇 ▷ Bogagga Waayeelada ee Qadka: Waxyaabaha Magaalada Imperial City waxay noqon doontaa bilaash ✅
Bogagga Waayeelada ee Qadka: Waxyaabaha Magaalada Imperial City waxay noqon doontaa bilaash
Warka ayaa ka imanaya Seattle, halkaas oo ah dhacdo ku saabsan Guurtida waayeelada qadka. Sida lagu daabacay akoonka rasmiga ah ee Twitter-ka waxaa ka socda Bethesda Spain, bisha Sebtember oo dhan Dhammaan waxyaabaha ku saabsan ballaarinta Imperial City waxay u noqon doonaan bilaash dhammaan ciyaartoydu.
In kasta oo aannaan haysan taariikh cayiman, waxa ku jira xor ayuu noqon doonaa laga bilaabo xafladda dabaaldega xiga ee Magaalada Dhagaxbuur, bishan. Shaki la’aan, waa war weyn oo loogu talagalay dhammaan kuwa aan wali helin DLC-ga ‘The Elder Scrolls Online’.
Waxyaabaha la soo dejisan karo ee Imperial City waxay xor u noqon doontaa qof kasta oo ka qeyb galaya munaasabada dabaaldega Imperial City bisha Sebtember. Aad u dhegeyso, maxaa yeelay waxaan bixin doonnaa faahfaahin dheeraad ah toddobaadkan! #TATALKA
Magaalada Caasimada ah, caqabado cusub iyo qulqulatooyin cusub oo loogu talagalay ‘Elder Scrolls Online’
Kuwa idinka mid ah oo aan garanaynin waxa kujira Magaalada ‘Imperial City’, ballaarinta cusub ayaa la timid godad cusub: White Gold Tower iyo xabsi. Iyaga, waxay lagama maarmaan u noqon doonaan shaqada kooxeed ee jawiga PVE ee hadafkiisu yahay inuu tuujiyo shaqada ugu wada shaqeynta badan ee shabakadda ‘Elder Scrolls Online’. Sidoo kale, kuwa jecel PVP waxay sidoo kale heli doonaan aagag cusub oo u oggolaanaya dagaal sidii aan hore waligood u arkin.
Dabcan nuxurka waxay noqon doontaa bilaash si joogto ah mana aha oo keliya inta lagu gudo jiro munaasabadda, sidaa darteed haddii aad jeceshahay waxa Imperial City ay bixiso, nasiib ayaad ku leedahay nasiib. Sidii aan ku sheegnay bilowga warka, wali ma hayno taariikhda saxda ah laakiin, sida had iyo jeer, laga bilaabo Xbox Generation waxaan kugula socodsiin doonnaa dhammaan wararka la ogyahay.